Hesekiel 48 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Sɛnea wɔbɛkyekyɛ asaase no mu (1-29)
Kurow no apon 12 no (30-35)
Wɔbɛfrɛ kurow no “Yehowa Wɔ Hɔ” (35)
48 “Mmusuakuw no din ni. Efi ase fi atifi fam noho: Dan kyɛfa+ no nam Hetlon kwan so kɔfa Lebo-Hamat,*+ na ɛkɔ Hasar-Enan kɔfa Damasko hye so wɔ atifi fam wɔ Hamat nkyɛn;+ n’ahye fi apuei kosi atɔe. 2 Aser kyɛfa+ toa Dan so, na n’ahye fi apuei kosi atɔe. 3 Naftali kyɛfa+ toa Aser so, na n’ahye fi apuei kosi atɔe. 4 Manase kyɛfa+ toa Naftali so, na n’ahye fi apuei kosi atɔe. 5 Efraim kyɛfa toa Manase so,+ na n’ahye fi apuei kosi atɔe. 6 Ruben kyɛfa toa Efraim so,+ na n’ahye fi apuei kosi atɔe. 7 Yuda kyɛfa toa Ruben so,+ na n’ahye fi apuei kosi atɔe. 8 Wufi Yuda asaase so a, efi apuei kosi atɔe no, asaase a mubetwa ayɛ ntoboa no, ɛsɛ sɛ ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa* 25,000,+ na ɛsɛ sɛ ne tenten ne mmusuakuw no nsaase a efi apuei kosi atɔe no yɛ pɛ. Wɔde kronkronbea no besi mfinimfini. 9 “Asaase a mubetwa ama Yehowa sɛ ntoboa no tenten bɛyɛ basafa 25,000, na ne tɛtrɛtɛ ayɛ basafa 10,000. 10 Asaase a mubetwa ayɛ ntoboa kronkron ama asɔfo no ni:+ Atifi fam bɛyɛ basafa 25,000, atɔe fam bɛyɛ basafa 10,000, apuei fam bɛyɛ 10,000; na anaafo fam ayɛ 25,000. Yehowa kronkronbea no bɛwɔ mfinimfini. 11 Ɛbɛyɛ asɔfo a wɔatew wɔn ho no dea, Sadok mma+ a wɔyɛɛ wɔn adwuma wɔ m’anim no. Eyinom na bere a Israelfo ne Lewifo no fii m’akyi no, wɔamfi m’akyi.+ 12 Wobenya asaase a wɔatwa sɛ ntoboa no bi wɔ Lewifo no nkyɛn, na ɛbɛyɛ ade kronkron paa. 13 “Lewifo no benya asaase wɔ asɔfo no de ho pɛɛ. Ne tenten bɛyɛ basafa 25,000 na ne tɛtrɛtɛ ayɛ basafa 10,000. (Asaase no nyinaa tenten bɛyɛ basafa 25,000, na ne tɛtrɛtɛ ayɛ basafa 10,000.) 14 Asaase no fã a ɛyɛ papa yi, ɛnsɛ sɛ wotwa bi tɔn, wɔde sesa biribi, anaa wɔdan ma obi, efisɛ ɛyɛ ade kronkron ma Yehowa. 15 “Asaase no fã a aka a ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa 5,000 a ɛda nea ne kɛse yɛ basafa 25,000 no ho no de, ɛbɛyɛ ɔmanfo asaase.+ Nnipa bɛtenatena hɔ na wɔde hɔ ayɛ mmoa adidibea. Na kurow no bɛda mfinimfini.+ 16 Kurow no kɛse ni: N’atifi yɛ basafa 4,500, anaafo yɛ 4,500, apuei yɛ 4,500, na atɔe yɛ 4,500. 17 Kurow no benya asaase a mmoa bedidi so: N’atifi bɛyɛ basafa 250, anaafo bɛyɛ 250, apuei bɛyɛ 250, na atɔe ayɛ 250. 18 “Asaase a ɛbɛka no ne ntoboa kronkron no tenten bɛyɛ pɛ.+ Apuei fam bɛyɛ basafa 10,000 na atɔe fam nso ayɛ 10,000. Ɛne ntoboa kronkron no nyinaa tenten bɛyɛ pɛ; na kurow no mu adwumayɛfo bedi so nnɔbae. 19 Kurow no mu adwumayɛfo a wofi Israel mmusuakuw nyinaa mu bɛyɛ asaase no so adwuma.+ 20 “Asaase a mubetwa ayɛ ntoboa mũ no nyinaa no, n’afã anan no biara bɛyɛ basafa 25,000. Momfa bi nyɛ ntoboa kronkron na momfa bi nyɛ kurow no asaase. 21 “Ntoboa kronkron no ne kurow no asaase no, nea ɛbɛka akyi wɔ ɔfã ha ne ɔfã ha bɛyɛ obirɛmpɔn no dea.+ Ɛbɛtoa asaase basafa 25,000 a ɛda asaase a wotwa yɛɛ ntoboa no apuei ne n’atɔe no so. Ɛne nsaase a ɛbɛn no no bɛyɛ pɛ, na ɛbɛyɛ obirɛmpɔn no dea. Ntoboa kronkron no ne asɔrefi no kronkronbea no bɛda mfinimfini. 22 “Lewifo no asaase ne kurow no asaase bɛda obirɛmpɔn no asaase ntam. Obirɛmpɔn no asaase bɛda Yuda+ ne Benyamin asaase no ntam. 23 “Na mmusuakuw a aka no de ni: Asaase a edi hɔ fi apuei fam hye so ba atɔe fam hye so no yɛ Benyamin dea.+ 24 Simeon kyɛfa toa Benyamin so,+ na n’ahye fi apuei kosi atɔe. 25 Isakar kyɛfa+ toa Simeon so, na n’ahye fi apuei kosi atɔe. 26 Sebulon kyɛfa toa Isakar so,+ na n’ahye fi apuei kosi atɔe.+ 27 Gad kyɛfa toa Sebulon so,+ na n’ahye fi apuei kosi atɔe. 28 Gad hye a ɛwɔ anaafo fam no befi Tamar+ akosi Meribat-Kades+ nsu ho, na ɛbɛfa Subon* no ho+ akɔpem Ɛpo Kɛse* no. 29 “Eyi ne asaase a mobɛkyɛ ama Israel mmusuakuw no+ sɛ agyapade, na abusua biara benya ne kyɛfa,”+ Awurade Tumfo Yehowa asɛm ni. 30 “Kurow no ho akwan ni: Kurow no atifi fam bɛyɛ basafa 4,500.+ 31 “Wɔde Israel mmusuakuw no din bɛfrɛ apon no. Apon abiɛsa a ɛwɔ atifi fam no, Ruben pon baako, Yuda pon baako, Lewi nso pon baako. 32 “Kurow no apuei fam bɛyɛ basafa 4,500, na ebenya apon abiɛsa; Yosef pon baako, Benyamin pon baako, Dan nso pon baako. 33 “Kurow no anaafo fam bɛyɛ basafa 4,500, na ebenya apon abiɛsa; Simeon pon baako, Isakar pon baako, Sebulon nso pon baako. 34 “Kurow no atɔe fam bɛyɛ basafa 4,500, na ebenya apon abiɛsa; Gad pon baako, Aser pon baako, na Naftali nso pon baako. 35 “Sɛ wosusuw ɛho nyinaa twa hyia a, ɛbɛyɛ basafa 18,000. Efi saa da no, wɔbɛfrɛ kurow no Yehowa Wɔ Hɔ.”+
^ Eyi yɛ basafa tenten no. Hwɛ Nkh. B14.
^ Kyerɛ sɛ, Egypt Subon.